नागरिकको लगानीमा दुई विशाल परियोजना बनाउँदै पाकिस्तान : नेपालले पनि कहिले गर्ने होला ? — Himali Sanchar
काठमाडौँ- चन्दा उठाएर साना र सामान्य काम भएको त आम मानिसलाई थाहा छ । तर ठूला ठूला परियोजना चन्दा उठाएर निर्माण गरिएको इतिहास संसारमा नै एकदमै कम रहेको छ ।
तर पछिल्लो पटक पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले स्वदेशी लगानीमा नै ५३०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका लागि चन्दा उठाउन थाल्नु भएको छ । पछिल्ला केही बर्षदेखि पाकिस्तानले चरम ऊर्जा संकट भोग्दै आएको छ ।
इमरान खान प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि उहाँले केही राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिरहनु भएको छ । विलाशी सवारी साधानको बिक्री वितरण, कर प्रशासनमा सुधार तथा नागरिककै जीवनशैलीका प्रधानमन्त्री रहने र जनतालाई केही आर्कषक र व्यवहारिक रुपमा सुधारात्मक अभियानबाट प्रधानमन्त्री खान पछिल्लो दिनमा चर्चित हुनुहुन्छ ।
उहाँले दुई बाँध बनाउने यो प्रयासमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने र अभियान विरुद्ध गए कारवाहीको भागिदार बन्नुपर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । ती ठूला बाँध बनाउनका लागि सरकारलाई पाकिस्तानको सेनाले पनि ठूलो सहयोग गरेको छ । पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवाले १०० करोड पाकिस्तानी मुद्राको चेक हस्तान्तरण गरिसक्नु भएको छ । पाकिस्तानी सरकारसँग सो बाँध बनाउनका लागि १४३ करोड पाकिस्तानी मुद्रा मात्रै रहेकाले पनि चन्दा उठाउन थालिएको हो ।
प्रधानमन्त्री इमरान खानले देश तथा विदेशका पाकिस्तानी नागरिकसँग चन्दाका लागि लामो अपिल गर्नुभएको छ । उहाँको अपिलमा ‘हामीले हाम्रा लागि गरौ, आफ्नो क्षमतामा गरौ र आफूलाई विश्वास गरौ’ भन्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
बाँध बनाउन धेरै पैसा आवश्यकता पर्ने भएपछि तीब्र गतिमा अभियान थालिएको हो ।
यसले सबैले देशलाई लगानी गरौ, देशले पछि दिनेछ भन्ने भावना जागृत भएको छ । पाकिस्तानले चन्दा उठाएर केही ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न सक्छ भने नेपालमा पनि त्यस्तो अभियान अगाडि बढाउन सरकारले प्रयास गर्न सक्छ । किनकी पाकिस्तानको खान नेतृत्वको सरकार नवनिर्वाचित हो । उसले अगाडि सारेका केही कार्यक्रमले यतिखेर संसारको ध्यान खिचिरहेको छ । के नेपालले पनि खान सरकारजस्तै केही सकारात्म्क अभियान सञ्चालन गर्न सक्छ ? प्रश्न अह्म र महत्वपूर्ण रहेको छ ।
विभिन्न समाचार एजेन्सीको सहयोगमा/ रासस